Home News Soomaaliya Oo Ka Qeeyb Galeysa Shirka 5-aad Ee Xuquuqul Insaanka Wadamada Islaamka
Soomaaliya Oo Ka Qeeyb Galeysa Shirka 5-aad Ee Xuquuqul Insaanka Wadamada Islaamka
Shirkii 5-aad ee Caalamiga ah oo ay yeelanayaan Guddiga Joogtada ah ee Arrimaha xuquuqul-Insaanka ee wadamada ku bahoobay Ururka Islaamka ayaa ka socda Magaalada Istanbul ee Dalka Turkiga,waxaana looga hadlayaa arrimo badan oo quseeya dowladaha Islaamka ee dunida.
Waxaa shirkani uu soo qaban qaabiyay guddiga Joogtada ah ee Arrimaha xuquuqul-Insaanka, Soomaaliya u matalaya wafdi ka socda wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul-Insaanka, kaasi oo uu horkacayo Agaasimaha guud ee wasaaradaasi Deeq Suleymaan Yuusuf.
Ajendayaasha sanadkan diiradda lagu saari doono shirkaasi inta uu socdo waxaa kamid ah arrimo la xiriira dhibaatooyinka Islaam neceybka,ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo faquuqa ka jira daafaha caalamka.
Shirkan ayaa sanadka ku soo aadaya iyadoo dunida daafaheeda ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo salka ku haya xadgudubyada xuquuqul-Insaanka,waxaana la filayaa in xubnaha matalaya wadamada ku mideysan ururka Iskaashiga Islaamku ay soo saaraan qodobo muhiim ah.
Previous articleDagaal ka dhacay Magaalada Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay!!
Next articleXildhibaano ka badbaaday isku day dil iyo walaac ay ka muujiyeen golaha Baarlabaanka
Madaxweyne Waare oo Hadal Culus ka dhawaajiyay Iyo Duqeeymaha Al-shabaab oo...
C/wali Gaas oo Ka Nixiyay Kooxda Qiyaano Qaran Iyo dalaaliinta Qatar...